, BIOS ထဲမှာ USB မှတ်-ဆိပ်ကမ်းများတွင်ဖွင့်
USB မှတ်-port များစက်မှုပျက်စီးမှုမှ flied လျှင်ယာဉ်မောင်းများ, BIOS ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, သို့မဟုတ် connectors functioning ကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ဒုတိယဖြစ်ရပ်အသစ်ဝယ်ယူသို့မဟုတ်စုဝေးကွန်ပျူတာစနစ်၏ပိုင်ရှင်များအကြားဘုံ, အဖြစ် Motherboard ကအပေါ်ထပ်ဆောင်းကို USB-port များတပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သောသူတို့အား, ဒါမှမဟုတ်ယခင်က BIOS ကို setting များကိုရဖို့အတွက်ရှိသူတို့သည်။
Learn, BIOS ကို, ဒါမှမဟုတ် UEFI ကွန်ပျူတာများတွင်အသုံးပြုသည်
I / O utput S ကို ystem nput B ကို asic - အချိန်ကြာမြင့်စွာ Motherboard က firmware ကိုအသုံးပြုတဲ့အခြေခံ type ကို BIOS ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်၏ထွန်း operating system မြားစျေးသည်၏အသစ်အဗားရှင်းပိုသစ်သောဗားရှင်းမှရွေ့လျားနေကြသည်အတူ - UEFI, ဦး niversal အီး xtensible က F irmware အတိုကောက်ဖြစ်သောငါဘုတ်အဖွဲ့ setup ကိုများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပိုမို options များပေးအပ်ခြင်း, nterface ။
Windows7ကိုတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် BIOS ကို Configuring
အသစ်တဦးတည်းအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အခြားအဘို့အအချို့သောအဟောင်းများ motherboards တွင်အများစုမှာမကြာခဏ Windows7၏ installation နှင့်အတူပြဿနာများရှိစေခြင်းငှါဤအတညျ့နိုင်သည့်, BIOS ထဲမှာမမှန်ကန်ကြောင်း setting များကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်ဘယ် operating system ၏ installation များအတွက် BIOS ကို setting များကိုစဉ်အတွင်း Windows7ကိုအောကျတှငျ BIOS ကို Setup ကို, အခက်အခဲများ, ရှိပါတယ်။
, BIOS ကနေ password ကို Remove
သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအခြေခံ input ကို system ကိုသုံးပြီး, အ operating system ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်မလိုချင်ကြပါလျှင်, BIOS တွင်, သငျသညျ, ဥပမာ, ပိုမိုသင့်ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်ပေးမယ့် password ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သငျသညျ, BIOS ကနေစကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူကသေချာပေါက်မဟုတ်ရင်သင်ကွန်ပျူတာအားလုံးဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်, restore ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
BIOS ကို setting များကို flash ကိုကနေ boot မှ
နေ့သည်ကောင်းသော။ သငျသညျ reinstall သည့်အခါနီးပါးအမြဲ, ကို Windows OS ကိုက boot menu ကို BIOS တည်းဖြတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ သငျသညျမယျဆိုရငျ - က bootable flash drive ကိုသို့မဟုတ်အခြားမီဒီယာ (သင် OS ကိုတပ်ဆင်စေချင်ဘယ်မှာ) ရိုးရှင်းစွာမြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤဆောင်းပါး၌ငါအသေးစိတ်လမ်းကိုမြင်ချင်ပါတယ်, (ဆောင်းပါးထဲမှာ BIOS ၏အတော်ကြာဗားရှင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း) ကို flash ကနေ boot လုပ်ဖို့ setting, BIOS အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
, BIOS ထဲမှာ virtualization Include
Virtualization အမျိုးမျိုးသော emulator နှင့် / သို့မဟုတ်ကို virtual စက်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူအသုံးပြုသူများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအတော်လေးဒီ option များ၏ပါဝင်မှုမရှိဘဲလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြပေမယ့် emulator ကိုသုံးနေစဉ် အကယ်. high performance ကိုလိုအပ်လျှင်, ပါဝင်သည်ရပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးသတိပြုပါအစပိုင်းမှာ, ကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို virtualization ထောက်ခံမှုရှိမရှိသေချာစေရန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူမရှိသလောက်, BIOS ထဲသို့ဝငျဖို့လိုအပျ, ဒါပေမယ့်ဥပမာ, သငျသညျကို Windows update လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်မည်သည့်တိကျတဲ့ setting များကိုဖြစ်စေလိုပါလျှင်, သင်ကတံခါးအထဲသို့ဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ Lenovo ကလက်တော့ပ်၌ဤဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်လုပ်များ၏မော်ဒယ်နှင့်ရက်စွဲပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနိုင်သည်။ Lenovo ကကနေအများဆုံးသစ်ကိုမှတ်စုစာအုပ်တွင် Lenovo ကပေါ် BIOS ကို Enter ကိုသင် Boot တက်အချိန်တွင် BIOS ကိုရိုက်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အထူးခလုတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
, BIOS ထဲမှာလုံလုံခြုံခြုံ Boot ကို laptop ကို disable လုပ်နည်း
နေ့သည်ကောင်းသော။ အတော်လေးမကြာခဏများစွာသောအသုံးပြုသူများသည် (ဥပမာ, ဒီ option ကိုသငျသညျကို Windows ကို install သည့်အခါကို turn off ဖို့တစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်) ကိုလုံလုံခြုံခြုံ Boot ကိုအကြောင်းကိုမေးခွန်းတွေမေးကြပါတယ်။ အဲဒါကိုကို turn off မပါဘူးဆိုရင်, (2012 ခုနှစ်မိုက်ကရိုဆော့ဖအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး) ဒီအကာအကွယ် function ကို scan နှင့်အထူးအဘို့ကိုကြည့်တော်မူမည်။ သာ windows 8 (သို့မဟုတ်မြင့်မားသော) တွင်ရရှိနိုင်သောသော့။
BIOS ကို၎င်း၏ပထမဆုံးအပြောင်းအလဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အများကြီးမဟုတ်ပြောင်းလဲမှုခံယူပေမယ့်အဆင်ပြေမယ့် PC ကို အသုံးပြု. များအတွက်အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ၏ update ကိုဖျော်ဖြေဖို့တစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်ပေသည်။ လက်တော့ပ်နှင့် (HP ကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သူတို့အားအပါအဝင်) ကွန်ပျူတာများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဆိုတိကျတဲ့ features တွေအားဖြင့်ကွာခြားပါဘူး။
, BIOS ထဲမှာလုံလုံခြုံခြုံ Boot ကို Disable
UEFI နဲ့ Secure Boot ကို - တစ် Boot တက် drive ကိုအဖြစ်ကို USB-သယ်ဆောင်ဖြန့်ချိဖို့စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ BIOS ကို, တစ်ဦးစံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလုံခြုံရေး protocol ကို Windows 8 နဲ့မြင့်မားတဲ့အပြေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အနှစ်သာရက Windows7ကနေနှင့် installer ကို (သို့မဟုတ်အခြားမိသားစုကနေ operating system ကို) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော boot မှအသုံးပြုသူတားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ပေါ်မှ BIOS (BIOS) ရိုက်ထည့်ပါနည်း။ BIOS မှ entry ကိုသော့
နေ့သည်ကောင်းသော။ သိပ်အများကြီးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများကအလားတူမေးခှနျးကိုအတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်။ အထူးသဖြင့်, သင် BIOS (BIOS) တွင်ရိုက်ထည့်ကြဘူးလျှင်ပင်ဖြေရှင်းမရနိုငျသောသူအချို့တာဝန်များကိုရှိပါတယ်: - သင်က Windows က reinstall အခါ, သင်ကို PC ကို USB drive ကိုသို့မဟုတ် CD-ROM ကိုကနေ boot နိုငျသောဦးစားပေးပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်; - အကောင်းဆုံးဖို့ BIOS ကို setting များကို reset; - အသံကဒ် enabled ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေး; - ဒါကြောင့်အပေါ်အချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုပြောင်းလဲစေနှင့်။
, BIOS ထဲမှာ Restore Defaults ကိုကဘာလဲ
အချို့သော BIOS ကိုဗားရှင်းမှာမရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာတွေထဲက« Defaults ကို Restore »ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာမူရင်းအခြေအနေမှ, BIOS ယူလာမှဆက်စပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်အတှကျ Operating နိယာမ၏ရှင်းပြချက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် option ကိုဖြစ်နိုင်သမျှ, BIOS သူ့ဟာသူအတွက်, တူညီတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစား« Defaults ကို Restore »လုံးဝမဆို BIOS ကိုအတွက်, သို့သော်, ဗားရှင်းနဲ့ Motherboard ကထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအမည်ဖြင့်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
BIOS ကိုအတွက် AHCI mode ကိုဖွင့်မည်
AHCI - ခေတ်မီ hard drive တွေ၏လိုက်ဖက်တဲ့၏ mode နဲ့ Motherboard က connector ကို SATA ။ ဒီ setting နှင့်အတူကွန်ပျူတာပိုမြန်ဒေတာ process လုပ်တယ်။ AHCI များသောအားဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့ PC များအတွက် default အနေဖြင့်ဖွင့်ပေးထားပေမယ့် OS ကိုသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာများကိုပြန်လည်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပိတ်နိုင်ဘူး။ အရေးကြီး AHCI-mode ကို enable လုပ်ဖို့သတင်းအချက်အလက်က BIOS ကိုသာသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပေမယ့် operating system ကိုသူ့ဟာသူဥပမာ, ကို "Command Prompt ကို" ကနေတဆင့်အထူး command များကိုရိုက်ထည့်ပါရန်။
, BIOS ထဲမှာ D2D ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတာဘာလဲ
ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှလက်ပ်တော့၏အသုံးပြုသူများ BIOS ကို parameter သည် D2D ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သူသည်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်အတိုင်း, restore လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤဆောင်းပါး၌သင်ဤ function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အလုပ်မဖြစ်လို့မရဘူးဘယ်လောက်, အ D2D restore အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တန်ဖိုးနှင့်အများဆုံး Laptop ကိုထုတ်လုပ်သူခုနှစ်တွင် D2D Recovery ကို (ပုံမှန်အားဖြင့် Acer က) တပ်ဆင်ထားမယ့် BIOS ကို parameter သည် D2D ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ Gigabyte Motherboard ကပေါ် BIOS ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
အဆိုပါ interface နဲ့ BIOS ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ (80 နှစ်) ကတည်းကအဓိကပြောင်းလဲမှုများကိုခံမဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအချို့သောကိစ္စများတွင်ပါက update လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။ အဆိုပါ Motherboard ကဖြစ်စဉ်ကိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်သော update ကိုများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေ, သင်သည်သင်၏တိကျတဲ့ကွန်ပျူတာများအတွက်သက်ဆိုင်ရာသောဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ASUS ကလက်တော့ပေါ်မှ BIOS ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း
BIOS ကိုက PC ကိုသို့မဟုတ် Laptop ကိုဖွင့်သည်ဖြစ်စေ, ပုံမှန်အားဖြင့်နေ့စဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပေါ်ရှိ Pre-installed ။ တိုင်းသားဘုတ်ဘို့သင့်ကိုတစ်ဦးတည်းသာပြုစုသူတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဗားရှင်းကနေ update ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိအဗားရှင်း, အဒီဇိုင်နာနှင့်မော်ဒယ် / Motherboard ကထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မည်။
Lenovo ကမှတ်စုစာအုပ်အပေါ် BIOS ကို update ကို
BIOS ကိုစနစ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအစီအစဉ်များအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၏မှန်ကန်သောအပြန်အလှန်များအတွက်ဝတ်ပြုကြလော့။ BIOS ကို၏ဗားရှင်းပစ္စည်းကိရိယာများကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေသည်ဘယ်လိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခါအားလျော်စွာ Motherboard က developer များပြဿနာများကိုဆုံးသို့မဟုတ်တီထွင်မှုဖြည့်စွက်, updates များကိုလွှတ်ပေးရန်။
တစ်ဦး BSOD "ACPI_BIOS_ERROR" စာသားကိုနှင့်အတူတစ်ဦးကို Windows ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပေါ်ပေါက်သောအဆိုးဆုံးအမှားတစ်ခုမှာ။ ယနေ့တွင်ကြှနျုပျတို့သညျဤပျက်ကွက်ပပျောက်ဖို့ရွေးချယ်စရာအားဖြင့်သင်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။ ACPI_BIOS_ERROR ပြဿနာများဖြစ်သည့် operating system ကို၏လုပျငနျးအတွက်ကားမောင်းသူပြဿနာများသို့မဟုတ်မူမမှန်အဖြစ် software ကိုဆုံးရှုံးမှုများမှအထိနှင့် Motherboard ကသို့မဟုတ်ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ကွက်ပြီး, အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပေါ်ထွန်းဆြေးြေိံးပပျောက်။
သင့်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီးနောက်၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု BIOS မှလွန် - ထိုသားဘုတ်ရဲ့ ROM ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားသေးငယ်တဲ့ firmware ကို။ BIOS OS ကို Loader ကိုမှထိန်းချုပ်လွှဲပြောင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအတည်ပြုရန်နှင့်သိရှိနိုင်ဖို့အလေးချိန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ်ကျရောက်ပါတယ်။ အဆိုပါ BIOS setting များကိုတဆင့်, သင်ရက်စွဲပြောင်းလဲနိုင်သည်, အချိန်, ဒါကြောင့်ထွက်, Boot တက်ပေါ်မှာ password ကိုသတ်မှတ် Boot တက်ကိရိယာ၏ဦးစားပေးဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်။
, BIOS ထဲမှာ hard drive ကို format လုပ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်းသင် operation system booting မပါဘဲ hard disk ကို partitions ကို format ဖို့လိုအပ်တဲ့အခွအေနရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဝေဖန်အမှားအယွင်းများနှင့် operating system ကိုအခြားအမှား၏ရှေ့မှောက်တွင်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာ -, BIOS မှတဆင့် hard drive ကို format လုပ်ကိုင်။
https://termotools.com my.termotools.com © BIOS 2019